Nextbike Konya Smart Baskiil Stations Jadwalka Qiimaha iyo Qaanuunka Xubinta | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaNextbike Konya Smart Baaskiillada Xariga
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY 0
jadwalka qarashka saldhigyada baaskiilka smart iyo isdhaafsiga xubnaha
Nextbike Konya, si kor loogu qaado isticmaalka baaskiil ahaan hab gaadiid raac marka lagu daro u adeegsiga madadaalada iyo ujeedooyinka isboorti; Nextbike Konya waxay ujeedadeedu tahay inay ballaariso Nidaamka Wadajirka ah ee Bikeka Smart Bike oo dhan Konya, sidaas darteedna ay siiso gaadiid caafimaad iyo jawi wanaagsan u leh dhammaan kuwa jecel baaskiil.
Nidaamka Wadaagista smart ee Baaskiilka, kuwa jecel baaskiilku maheyn inay wataan baaskiilkooda, waxay ka kireysan karaan bushkuleeti xarumaha xiga ee Konya oo ay ugu tagi karaan saldhig kasta oo Nextbike Konya.
Nextbike Sidee bay u shaqaysaa?
Baaskiilada baaskiilka waxaa laga heli karaa barta bartamaha Konya. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad u soo qaadatid ELKART-kaaga u dhow dareemayaasha oo aad baaskiil u qaadatid Si aad ugu soo celiso baaskiilka, si fudud ugu dhig bushkuleeti meel bannaan oo laga heli karo saldhigga. Ama waad iska diiwaangelin kartaa halkan, ama mid ka mid ah saldhigyadayada inta lagu jiro kiradaada ugu horreysa.
Waxaad u baahan tahay kaarka deynta si aad ugu kiraysato baaskiil! Gali lambarkaaga moobiilka, magaca iyo faahfaahinta kaarka deynta oo bilaw baaskiil! Haddii aad haysato ELKART, waa inaad ugu soo dhawaysaa dareemayaasha muddada diiwaangelinta.
Haddii aad ka diiwaangashan taybiilka websaydhka kahor, u soo qaado ELKART u dhaw sheyga, geli lambarka taleefankaaga iyo lambarkaaga PIN. Hadda waxaad kaliya ugu baahan tahay ELKART-gaaga kirada iyo soo celinta!
U dhaqaaji ELKART u dhaw qalabka
Baaskiilku si otomaatig ayuu u furayaa
Waad soo qaadan kartaa bushkuleetiga oo leh seenyaalaha saldhigga ku yaal
Waxaad ku arki doontaa lambarka qufulka baaskiilka shaashadda marinka fariin macluumaad ah (SMS ama wicitaan gaaban) ayaa loo diri doonaa taleefankaaga moobiilka.
Soo laabashada Nextbike
Baaskiil dhig meel ku habboon saldhigga
Nalal saldhig ah ayaa muujinaya in baaskiilku si guul leh lagu soo noqday
Fadlan quful baaskiilka markaad soo noqoto.
Waxaan duubnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed ka hor intaanan isticmaalin nidaamka kirada baaskiilka. Nidaamkeena wuxuu kugu aqoonsan doonaa lambarkaaga taleefanka ee kirooyinka dambe. Markii la diwaangaliyo, waxaad u isticmaali kartaa nidaamkayaga kirada baaskiilka ee dhammaan magaalooyinka ku xiga ee adduunka oo dhan. Xisaabta macaamiisha waxaad ku kireysan kartaa ilaa bushkuleeti 4.
Waxaad ku bixin kartaa kaarka deynta. Si loo xaqiijiyo macluumaadkaaga bixinta, 1 TL ayaa lagaa qaadi doonaa kaarkaaga. Qaddarkan waxaa laguugu xisaabin doonaa koontadaada isticmaalkaaga.
Jadwalka Nextbike Konya Fee Jadwalka
Waxaan awoodnaa inaan bixinno qiimo aad u qurux badan oo aan ugu mahadcelinay nidaamyada kirada ee dabacsan iyo joogitaanka shuraakadeena xayeysiinta sidoo kale si fudud.
Heerka caadiga ah:
Waxaad ku celin kartaa baaskiilkaaga goobahayaga rasmiga ah. Fadlan fiiri meeshayaga si aad u aragto goobahayaga.
Khidmadaha kale ee adeegga
Ku noqo meelaha aan rasmiga ahayn ama goobaha: 4 TL halkii km, ugu yaraan 20 TL
Dhaawac ama xatooyo: 300 TL
Lacagtaan ayaa loo ururin doonaa iyada oo loogu talagay saadka. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga.
Haddii ay dhacdo waxyeello ama xatooyo, qofka kiraysan baaskiilka waxaa lagu soo dallaci doonaa khidmad ah 300 TL. Haddii ay dhacdo dayacaad daran ama si ula kac ah loo waxyeelleeyo, qofka baaskiil kireystay wuxuu si buuxda mas'uul uga yahay sharciga. Baaskiilku waa adiga masuuliyadaada laga bilaabo isla marka aad hesho lambarkaaga kirada baaskiil ilaa kooxdeena adeegga ay hubiyaan baaskiilka oo ay go'aansadaan inay kiraystaan ​​isla baaskiil. Jeegagyadu waxay u dhici karaan si kadis ah (gudaha 48 saacadood gudahood ka dib soo laabashada baaskiilka).
Eeg shuruudaha iyo shuruudaha wixii macluumaad dheeri ah.
Hal mar maalintii ugu horreysa ee 30 min bilaash ah
24 wuxuu daawadaa 15 TL
Usbuucyada 1 (7 maalmood) 60 TL
Khariidadda Konya Netbike